HomeIZAO TONTOLO IZAOAFRIKA255 TanzaniaTest Drive amin'ny Darussalam Morogoro Railway
08 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 255 Tanzania, AFRIKA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, PHOTOS, ANKAPOBENY, Headline 0
Tao amin'ny tetikasa SGR an'ny DSM (Darussalam Morogoro) tao amin'ny Repoblika iraisam-pirenen'i Tanzania, ny fizotry ny fanandramana voalohany dia natao tamin'ny 06.07.2019 tamin'ny fandraisan'anjaran'ny Minisitry ny Fitaterana Tanzaniana Isack A. Kamwelwe, tale jeneralin'ny TRC Masanja Kadogosa sy ny talen'ny tetikasa Korail DSM Jong Hoon Cho. Ny delegasiona dia noraisin'i Erdem Arıoğlu, filoha lefitry ny Yapı Merkezi, Abdullah Kılıç, tompon'andraikitry ny tetikasa DSM, ary ekipa ao amin'ny Soga Station an'ny DSM Project.
Erdem Arıoğlu, Masanja Kadogosa ary Isack A. Kamwelwe dia nanao kabary talohan'ny fitiliana. Erdem Arıoğlu, araka ny kabariny, dia nanamarika ny maha-zava-dehibe ny tsipika ho an'i Tanzania ary nanambara fa ny andalana dia ny laharana haingana indrindra natsangana tany Afrika Atsinanana. Ny filazana fa anio amin'ny andro manan-tantara amin'izao fotoana izao ny tetikasa, nilaza i Arıoğlu fa nandeha an-tongotra izy ireo tamin'ny faran'ny tetikasa.
Taorian 'ny kabariny, i Erdem Arıoğlu dia nanome fampahalalana mikasika ilay tetikasa ho an'ny delegasiona eo anoloan'ny biraon'ny fampahalalam-baovao napetraka eo amin'ny fidirana ao amin'ny gara. Taorian'izay, ny delegasiona nitsidika ny tetikasa DSMA Soga Station dia nahazo ny tapakilam-piofanana an-tariby nanomanana ny fizotry ny fizahan-tany ary nandeha tamin'ny lamasinina.
Ny fiarandalamby niainga avy tao amin'ny Station Soga (Km: 50) mankany Km: 69 + 450 amin'ny lamasinina, niverina tany amin'ny seranam-piaramanidina Soga tamin'ny lamasinina taorian'ny Km 20 + 69 ny delegasiona.
Minisitry ny fitaterana Isack A. Kamwelwe dia nanao fanambarana tamin'ireo mpikambana amin'ny mpanao gazety taorian'ny diany ary vita ny lanonana taorian'ny foto-drafitr'asa fahatsiarovana.
Tanzania Darussalam - Tetikasa Railroad Morogoro no nametraka ny fototra 01 / 05 / 2017 Tanzania Darussalam - Tetikasa Railway Morogoro no nanorina ny fototra: Yapı Merkezi dia manangana ny lalamby fifamoivoizana haingana indrindra any Afrika Atsinanana. Ny fototry ny tetikasam-pitrandraonan'i Railway Darussalam-Morogoro any Tanzania, izay mendrika ny vola eo amin'ny $ 10 miliara dolara dia napetraka. Ny fizarana voalohany amin'ny tsipika totalin'ny 1.1 km, ny tetikasa 1.224 km no ampahany manan-danja indrindra amin'ny tsipika. Raha vantany vao vita ny tsipika 205, dia hampifandray an'i Oganda, Rwanda, Repoblika Demaokratikan'i Kongo ary Tanzania ary atokana ho any amin'ny Oseana Indianina ihany koa i Afrika Atsinanana. Ny lanonam-panohanana dia natao tao Darussalam Pugu nataon'ny filohan'i Tanzania. John Pombe Joseph Magufuli, Minisitry ny Asa, Fitaterana sy Fifandraisana any Tanzania Mpanao ...
Ny tetikasam-pitrandrahana Darussalam-Morogoro dia tanteraka tamin'ny dingam-pandeha voalohany 20 / 09 / 2018 Fahombiazana lehibe iray hafa no tratra tao amin'ny tetikasa Railway Darussalam - Morogoro Railway, izay nataon'ny Yapı Merkezi. Ny fiarandalamby voalohany amin'ny fiarandalamby amin'ny fahatongavan'ireto voalohany ireto, Mr. Isack Kamwelwe, Minisitry ny Fitaterana an'i Tanzania, Atashasta Nditie, Mpanolotsaina ho an'ny Fitateram-bahoaka any Tanzania, Governemanta SözcüsüHassan Abbas, tale jeneralin'ny TRC Masanja Kadogosa, talen'ny TRC Project Maizo Mgedzi sy ny ekipan'ny Building Manager ao amin'ny ekipa Kemal Artüz'un tarihin'ny lamesa mafana fo. Ny minisitra dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa tena faly sy faly izy noho ny fandrosoan'ny fanorenana Darussalam - Morogoro Railway, izay nantenain'izy ireo ny fivoaran-draharaha amin'ny fomba mitovy ary ny tetikasa.
Fiatrehana fitsapana voalohany ho an'ny serivisy entana haingam-pandeha haingam-pandeha ho an'i Frantsa sy Grande-Bretagne 06 / 04 / 2012 Tamin'ny faran'ny volana marsa 2012, ny fananganana ny sampan-draharaham-panjakana, ny seranam-piaramanidina sy ny seranam-piaramanidina mpiara-miasa, Euro Carex, dia nandinika ny famoahana ireo fiara fitaterana haingam-pandeha sy serivisy. 120 dia hanompo ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Lyon-Saint-Exupéry sy station ao St Pancras any Londres. Ny ora fiasana dia ora 8 ora 30 minitra, efa inefatra avo efatra heny ny dia nandritra ny fotoana nampiasana fiaran-dalamby mahazatra. Raha mahomby ny tetikasa, dia hanomboka amin'ny 2015 ny fampiasana fiarandalamby haingam-pandeha amin'ny fiara fitaterana entana any Paris-Lyon, London-Amsterdam-Brussels-Frankfurt. Loharano: Raillynews
Fihetseham-pitsapana tao amin'ny Railway Baku-Tbilisi-Kars 28 / 09 / 2017 Ny minisitry ny fitaterana, ny seranam-piaramanidina sy ny serasera, Ahmet Arslan, Baku-Tbilisi-Kars Railway taorian'ny adina fanandramana dia niresahana tamin'ireo olom-pirenena nivory mba hihaona aminy. Tamin'ny lahateniny tao amin'ny Kars Station, Arslan dia nanindry manokana fa ny Filoha Azerbaijan Ilham Aliyev dia manana lanjany lehibe amin'ity tetikasa ity ary nisaotra ny filoha Recep Tayyip Erdogan, Filoha Aliyev sy Filoha Georgiana Giorgi Margvelashvili. Ny tetikasa ao amin'ny fanontaniana teo am-piandohan'ny Armstrong nampahatsiahy fa maka toerana toy ny birao, "Binali ny Praiminisitra Yıldırım, avy amin'ny vanim-potoana ny amin'ny fanompoana ao amin'ity tetikasa ity tena zava-dehibe vermişken mianjera antsika tsara mba hitarika azy ireo ho amin'ny fisakaizana ny tetikasa dia ny hanao izany andro izany." Ny fanombanana hita. "Ny dingana goavana dia ao ambadik'io" sarotra amin'ny tontolon'ny tetikasa ...
Fitsapana ny lalana amin'ny lalana vaovao ao Kayseri 06 / 01 / 2014 Ny fepetra fitsangatsanganana vaovao an-dalamby nataon'i Kayseri: Ny tanànan'i Mehmet Özhaseki, tanànan'i Kayseri, izay nanampy ny lalam-piaramanidina 10 kilometatra Ildem no nanao ny dingana voalohany tamin'ny làlana. Nanambara ny Ben'ny tanàna Özhaseki fa hisy telo na mihoatra ny rafi-dalamby manomboka amin'ny lohataona ary amin'izao fotoana izao, dia hanomboka eo amin'ny İldem Beyazşehir sy ny Oniversite Erciyes ny volana aogositra. Filoha Mehmet Özhaseki, amin'ny ankapobeny ihany no vita ary nanao lalana lalamby İldem dia nitoetra teo amin'ny fianarana hanao fanandramana fiara mijanona. Nanao fanambarana tamin'ireo mpanao gazety ny ben'ny tanàna Özhaseki. "Ny vahoakanay ao İldem sy Beyazşehir dia natsangana ho any afovoan-tanàna avy any ...
Niala sasatra tany Bursaray ny fandroahana noho ny tsy fahampian'ny herinaratra
Androany teo amin'ny tantara: 9 Jolay Conseil des 1922 à Rosia
Tanzania Darussalam - Tetikasa Railroad Morogoro no nametraka ny fototra
Ny tetikasam-pitrandrahana Darussalam-Morogoro dia tanteraka tamin'ny dingam-pandeha voalohany
Fiatrehana fitsapana voalohany ho an'ny serivisy entana haingam-pandeha haingam-pandeha ho an'i Frantsa sy Grande-Bretagne
Fihetseham-pitsapana tao amin'ny Railway Baku-Tbilisi-Kars
Fitsapana ny lalana amin'ny lalana vaovao ao Kayseri
Ny fiatrehana fitsapana voalohany amin'ny fiaran'ny Gar-Tekkeköy (Video)
Fitsapana voalohany mandeha amin'ny Başkentray Line
Fitsipika fitiliana amin'ny tsipika metatra Kartal-Kadıköy
3 any Antalya. Fitsapana voalohany mitondra fiara fitaterana an-dalamby
Antalya 3. Fitsapana ny dian-tongotr'ireo rafitra fitaterana